Ngokuvamile, ukufunda mayelana sokukhulelwa, abesifazane bathole ukuthi imizimba yabo awakulungele lekusasa esisha esinjalo. Ngakho-ke, ngemva kokuvakashela udokotela wezifo zabesifazane kanye ukulethwa kwazo zonke ihlaziya inikezwa inamba enkulu imithi ukuthi owesifazane okhulelwe kufanele athathe kulo esigabeni esinzima ekuphileni kwabo.
Kodwa ezinye izidakamizwa zidinga isiphuzo izifundo, avame kuba ngezikhathi lapho kungenzeka imikhuhlane iyagula. Futhi akusiyo ngisho ezifiselekayo, lapho owesifazane ubeletha umntwana. Ukuze uhlobo okwenzekile, udokotela wezifo zabesifazane, futhi ngezinye izikhathi ezinye odokotela, kuncike pathologies ukuthi kudingeka zixazululwe, linqume amavithamini: askorutin, i-folic acid nezinye. It kwenzeka kaningi impela.
Askorutin ebekiwe ngesikhathi sokukhulelwa bonke abesifazane, kungakhathaliseki ubudala noma isikhundla emphakathini, kodwa kubalulekile ukwazi ukuthi ukusetshenziswa ukuthi ukulungiselela Vitamin akuyona efiselekayo ekuqaleni senyanga yokuqala, lapho umbungu kuphela ekuqaleni ukuthuthukisa. Yini eyenza lokhu izidakamizwa? Ukuze lokho ngezinhloso ke esabela udokotela? Izingxenye ezisemqoka "askorutin" kuthiwa rutin futhi ascorbic acid, njengoba waziwa kabanzi, zinyanga kahle neqhaza ekuthuthukiseni kanye nokugcinwa izivikeli mzimba ezingeni lelifanele, ngoba isidumbu abakhulelwe abaguliswa ekuqaleni kwehlisa amasosha omzimba, ukujwayelana isimo esisha. ke ubuye ngempela kuhle ekuqiniseni capillary semithambo, abenze zazivuma futhi nokunwebeka.
Rutin kusiza ukuqinisa izindonga imithambo yegazi, okuyinto ngesikhathi sokukhulelwa abasakwazi mncane. Lo vithamini kanti futhi kuhle ekuqiniseni amasosha omzimba, siyehla ukushaya kwenhliziyo, ukwehlisa igazi ingcindezi naphakathi-ocular. It Ubuye analgesic kanye nokuzikhulula ekucindezelweni ukuvuvukala, futhi eqinisweni abakhulelwe ngokuvamile ukukhononda ngalokhu. Ngakho-ke, njengoba ungabona, imiphumela emihle yesicelo iyatholakala. Kodwa ngisho noma sikhuluma wokulungiselela enjalo ayiyona ingozi uma "Ascorutin" kufundiswe ngesikhathi sokukhulelwa kufanele wafunda ikakhulukazi eduze. Ngomqondo onabile, inkulumo izidakamizwa ayivamile ukubangela ngempela sobala engemihle. Uma umuntu ngokuvamile enempilo, ngisho komzimba akakwazi ukubhekana ngesikhatsi ukwelashwa.
Phakathi nenkathi yokukhulelwa, umzimba wakhiwa, washintsha eziningi izilungiselelo yayo yasekuqaleni, nokunye askorutin ngesikhathi sokukhulelwa kungabangela abanye disorder wokugaya ukudla, okwesikhashana futhi kancane kukhushulwe izinga lokushisa emzimbeni noma avuse migraine. Uma konke lokhu okungenhla, yaphawula kufanele ngokushesha ukumisa ukusebenzisa leli imithi tshela udokotela wakho.
Phuza "Ascorutin" amavithamini kanye nokudla noma ngemva nje ukusetshenziswa kwaso, ikakhulukazi kathathu ngosuku - kusihlwa, ekuseni nantambama. Kodwa uma owesifazane okhulelwe kuthatha iyiphi amavithamini, reception askorutin kumele kungancipha ukuze ugweme ukweqisa izidakamizwa vitamin "C", nakuba abaningi amanani sakhe ngokweqile umzimba excreted ku umchamo ezaziwayo.
Kaningi abakhulelwe baba abandayo, futhi uma ukopha babonakala lapho beshaya ekhaleni, kusukela Lore leli qiniso ngeke aphunyuke. Wenza i ukulungiselela aphoyintimenti Vitamin kusaqalwa yokukhulelwa, kodwa kusadingeka ukucacisa kanye wezifo zabesifazane. Ngemva kwalokho ukwelashwa kokuqala, kunciphise umthamo.
Kaningi, ukukhulelwa angadala izinkinga ezifana hemorrhoids. Askorutin ngesikhathi sokukhulelwa kusiza ukuzixazulula ngempela ngobumnene ngokuphepha. Futhi, inani elikhulu abesifazane baphathwa varicose emithanjeni on the imilenze, kodwa izidakamizwa kuzonciphisa inkathazo ubuncane noma kuqedwe ngokuphelele. Uma ihlule legazi kubi ngokwanele, askorutin ngesikhathi ukhulelwe kuzosiza ukuvimbela ukulahleka igazi eliningi ngesikhathi sokubeletha. Thatha kufanele kube nje ngaphambi kokuzalwa kwengane, propyl Yiqiniso ngaphakathi akukho ngaphezu kwenyanga.
Nokho, zinike oyiphuzayo ngesikhathi sokukhulelwa kuphela emva kokubonisana udokotela wakho.
Amasosha Omzimba e Ukukhulelwa: Yini kuyingozi RH ukungqubuzana neqembu ukungavumelani
Ngingaba hawthorn ngesikhathi sokukhulelwa kusaqalwa?
Deja vu - kokunikezwa kwe-psyche noma Kuyaziwa?
I generator igesi endlini nge uqalisa: Izibuyekezo
Taumonomikon kanjani e "Maynkraft"?
Megan Fox ngaphandle kokwenza futhi ngaphambi kwamaplastiki
Yokuhamba ngezinyawo sauna - kungcono ngempela
Dream Ukuhunyushwa: yini iphupho ukuphula iqanda? Kungani iphupho amaqanda ngobugebengu?